Android? နာမည်ကိုကြားတာနဲ့တင်အတော်များများရင်းနှီးကြမှာပါ။ ဒါဆိုရင် Android ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလဲ? ဘယ်သူတွေက စ ပြီး ဖန်တီးခဲ့တာလဲ? Introduction လေး စ လိုက်ရအောင်။
Android OS ကို စတင် develop လုပ်ခဲ့တာက ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ Android, Inc. ဆိုတဲ့ company အသေးစားလေးက ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ Google က လိုင်စင်ကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ Alpha release ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့ပြီး Android 1.0 အနေနဲ့ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ Beta release ကိုတော့ ၂၀၀၉ မှာ စ တင်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်အထိကို အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။
ထူးထူးခြားခြားသတိထားမိကြတာ ကတော့ HTC Dream ဆိုတဲ့ဖုန်းကို ပထမဆုံးအနေနဲ့ Android version 1.6 (Donut) ထည့်သွင်းပြီး မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ရာကနေ လူသိများလာခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုအချိန်အထိကို keypad ဘဝက သိပ်မလွတ်ချင်သေးတာကိုတော့ သတိပြုမိကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ capacitive touchscreen အနေနဲ့ ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပြီးနောက် touch ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီး operate ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Micro SD ကို 16GB အထိ support ပေးခဲ့ပါတယ်။
Android Version များ
2.0 - 2.1 (Eclair)
2.2 - 2.2.3 (Froyo)
2.3 - 2.3.7 (Gingerbread)
3.0 - 3.2.6 (Honeycomb)
4.1 – 4.3.1 (Jellybean)
5.0 – 5.1.1 (Lollipop)
6.0 – 6.0.1 (Marshmallow)
7.0 – 7.1.1 (Nougat)
Android version သမိုင်းကြောင်း ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ 1.5 ကနေ စ ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မုန့်အချိုတွေရဲ့ နာမည်ကိုသာ သုံးထားပြီး A B C D အက္ခရာအစဉ်အလိုက်ဖြစ်နေတာကို သတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။ Android 3.0 (Honeycomb) ဟာ Tablet တွေအတွက်သာထွက်ခဲ့ပြီး popular လည်းလုံး၀မဖြစ်ခဲ့တဲ့ OS Version ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Android version နံပါတ်ပေါ် သုံးလေးချက်ထောက်ပြီး ပုံပေါ်လာတာ၊ Ice Cream Sandwich လေးတွေပျံနေတာ၊ Jellybean လေးတွေ လေထဲလွင့်နေတာ၊ K လေးလည်နေတာ၊ Flappy Bird လိုဂိမ်းလေးပေါ်လာတာ အဲ့တာတွေရဲ့အစက Android 2.3 (Gingerbread) မှာ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Third-party launcher များကိုအစောပိုင်းကာလ Android version များမှာ လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ လိုသလို customize လုပ်လို့ရတဲ့အထဲမှာ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာတော့ ကျွန်တော့် technical terms အနည်းငယ်သုံးရပါမယ်။ Android OS ဟာ Linux kernel အပေါ်အခြေခံပြီး Java code တွေ framework တွေနဲ့ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ touch အပေါ်ဦးတည်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတဲ့ system တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် (နောက်ပိုင်းမှာတော့ external keyboard, mouse နဲ့ အခြား devices များ supporting ပေးလာခဲ့ပါတယ်)။
Android ဟာ Open source ဖြစ်ပါတယ်။ Open source ဆိုတာကတော့ မည်သည့် developer မဆို မည်သည့် manufacturer မဆို အခြေခံ GPL License တွေရဲ့ကန့်သတ်ချက်မှလွဲပြီး တခြားဘာမှ ကန့်သတ်မှုမထားရှိပဲ လိုသလို sync လုပ်ပြီး Custom OS တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်တာကိုပြောတာပါ။ ဒါကြောင့်သာပဲ နောက်ပိုင်းဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီအတော်များများဟာ Android OS အပေါ်မှာပဲ Company အလိုက် သူ့ပုံစံနဲ့သူ၊ Encryption တွေနဲ့သူ မျိုးစုံ customized လုပ်ထားတဲ့ OS ပုံစံတွေနဲ့ထွက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ base အနေနဲ့ကတော့ Android ကိုပဲယူသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
(User တွေအနေနဲ့ ဖတ်ရှုထားတဲ့အပေါ်မှာ မေးနိုင်တဲ့မေးခွန်းများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း အမေးအဖြေတွေ ကျွန်တော်ဖြေပြပေးထားပါတယ်။ သိလိုသည်များကိုလည်း TechX Myanmar Facebook Page ကနေ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်)
မေး ။ ။ Android ဟာဘာကြောင့် iOS ကိုမယှဉ်နိုင်တာလဲ?
ဖြေ ။ ။ Android ရဲ့ potential ဟာ iOS ကိုယှဉ်ဖို့ထက် experience တွေကမှ တစ်ဆင့်ကောင်းမွန်တဲ့ UNIX OS source တစ်ခုဖြစ်အောင်ဦးတည်သွားဖို့ပဲရှိတာပါ။ အခြားOS တွေထက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးတာပေါ့။ Competitor မရှိပဲနဲ့လည်းလျှောက်နေတဲ့လမ်းကလည်း တိုးတက်ဖို့အတွက်ခွန်အားပေးနိုင်မယ်လို့ သိပ်မထင်မိပါဘူး။
မေး ။ ။ Android ဖုန်းတွေကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ တွေ့နေရတယ်။ Android ရဲ့ မူလပုံစံဆိုတာကော ရှိကောရှိရဲ့လား?
ဖြေ ။ ။ ရှိတာပေါ့ဗျာ။ သိပ်ရှိတာပေါ့။ များသောအားဖြင့် Nexus တွေနဲ့ အစောပိုင်း Huawei ဖုန်းတွေမှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ Android ရဲ့တကယ့် Pure (AOSP) ပုံစံတွေ။
မေး ။ ။ Android ဟာ PC OS တွေကိုယှဉ်လာနိုင်ဖို့ အလားအလာ ရှိလား?
ဖြေ ။ ။ ဒါကတော့ User preference နဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ထင်မိတယ်။ User တွေကသာ Android နဲ့တအားကျွမ်းဝင်လာပြီဆိုရင်၊ Android ဟာလည်း PC World ထဲမှာလည်း နေရာတစ်ခုရလာလောက်မယ့် အလားအလာရှိပြီဆိုရင်တော့ Development တွေလုပ်လာကြမှာပါ။ လောလောဆယ်မှာတော့ အလားအလာသိပ်မရှိသေးပေမဲ့ Android ကို mobile device အတော်များများမှာထည့်သွင်းလာကြပြီး user တွေနဲ့လည်း အတော်များများရင်းနှီးမှုရှိကြတယ်ဆိုတာကို ခင်ဗျားတိုမျက်မြင်တွေ့ရမှာပါ။ အခုဆိုရင် မော်နီတာနဲ့ဖုန်းနဲ့ကိချိတ်ဆက်ပြီး ဖုန်း OS ကို PC OS တစ်ခုအသွင်ပြောင်းသုံးနိုင်တဲ့ Remix OS တွေလည်း ပေါ်လာပါပြီ။
မေး ။ ။ ကျွန်တော်ကော ကိုယ့် custom OS တွေကိုယ်လုပ်ပြီး ကျွန်တော့်ဖုန်းမှာ သုံးလို့ရလား?
ဖြေ ။ ။ ခင်ဗျားအတွက် source ရှိတယ်ဆိုရင်ရပါတယ်။ အဓိက က ခင်ဗျားဖုန်းရဲ့ kernel source တွေပေါ့။ အဲ့တာနဲ့အတူ Android source တွေရယ် ခင်ဗျားရဲ့ mod လုပ်နိုင်မယ့် ability တွေရယ် (အဓိကကတော့ bugs တွေရှင်းနိုင်ရမယ်ပေါ့ဗျား logcat များများသုံးနိုင် ဖတ်နိုင်ရမယ်ပေါ့ ဟဲဟဲ) ခင်ဗျားရဲ့ Android SDK အပေါ်အကျွမ်းတဝင်ရှိမှုတွေရယ်က အများကြီးမူတည်သွားပါလိမ့်မယ်။
Features Google Android Operating System Android History